Guddoomiyaha baarlamaanka dowlada Puntland Axmed Cali Xaashi oo booqday goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyaha baarlamaanka dowlada Puntland Axmed Cali Xaashi oo booqday goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii Gaalkacyo
August 24, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha baarlamaanka dowlada Puntland, Axmed Cali Xaashi oo booqday goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii Gaalkacyo. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka dowlada Puntland, Axmed Cali Xaashi oo maanta oo Arbaco ah tagay magaalada Gaalkacyo ayaa booqday goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii Gaalkacyo.
Guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay kadib booqashada, ayaa tacsi u diray guud ahaan shacabka Puntland gaar ahaan bulshada Gaalkacyo, isagoo sidoo kale tilmaamay in dhibaatooyinka ay geystaan kooxda Al-Shabaab aysan ka hor istaagi doonin masuuliyiinta iyo shacabka Puntland in ay dalkooda dib u dhisaan, isla markaana ay dagaal la galaan argagixisada Al-Shabaab.
Axmed Cali Xaashi ayaa guud ahaan shacabka Puntland ugu baaqay in si wada jir ah looga qayb qaato dib u dhiska hantidii ku burburtay weerarkii Gaalkacyo.
Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay weeraro isbiimayn ahaa oo asbuucaan bilowgiisii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal hanjabaad ah oo uu jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed. Shir saxaafadeed xalay uu ku qabtay Muqdisho wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadalka Shariif [...]